ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုအား ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း – Driver
ယာဉ်မတော်တဆဖြစ်မှုများနှင့် လုံခြုံ စိတ်ချရမှုဆိုင်ရာ အာမခံမူဝါဒများ
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးသည် လူတိုင်းတန်ဖိုးထားဦးစားပေးသည့်အလျောက် ခရီးစဉ်အချိန်ကြာခြင်း သို့မဟုတ် ရှည်လျားခြင်းတို့နှင့် မသက်ဆိုင်သော်လည်း ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် မတော်တဆမှုများဖြစ်သွားနိုင်သည်ကိုလဲ သတိပြုသင့်ပေသည်။
တခါတလေမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုသတ်မှတ်ချက်အဆုံးထိ ရောက်မှန်းမသိရောက်နေတတ်ကြပါတယ်။ ယခုဆိုရင်တော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၄ နာရီအတွင်း သင်မောင်းနှင်ခဲ့တဲ့ မောင်းနှင်မှုပုံစံပေါ်မူတည်၍ အနားယူဖို့သတိရစေရန် သတိပေးနိုင်မဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်တစ်ခုကို Grab မှမိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။
ဒီလုပ်ဆောင်ချက်က ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ ?
Grab ရဲ့ အချက်အလက်သိပ္ဗံနှင့်တွက်ချက်မှုတွေက သင်အချိန်ကြာမြင့်စွာယာဉ်မောင်းနှင်နေခြင်းဖြင့် အလွန်အကျွံ ပင်ပန်းမှုဖြစ်စေနိုင်ခြင်းရှိကြောင်း သိရှိမိပါက အသိပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အသိပေးစာရသော်လည်း ပင်ပန်းသည်ဟုမခံစားရပါက ဘာဖြစ်နိုင်ပါသလဲ ?
တစ်ဦးခြင်းစီတွင် ပင်ပန်းခြင်း/မပင်ပန်းခြင်းကို သတ်မှတ်ထားပုံခြင်းတူညီနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ်။ သို့ရာတွင် ပင်ပန်းမှုအဆင့်ကို မိမိကိုယ်ကိုသတ်မှတ်ခြင်းမှာ အမြဲတိကျနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် Grab မှ လူတစ်ဦး၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်နိုင်ခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်စေခြင်းတို့ကိုဖြစ်နိုင်သော အချက်အလက်များနှင့် သင်နောက်ဆုံး ၂၄ နာရီမှာမောင်းနှင်ခဲ့တဲ့ပုံစံကို တိုက်ဆိုင်အကဲဖြတ်၍ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အသိပေးစာများဟာ သတိပေးရုံမ ျှသာ လုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်း ယခုအချိန်တွင် စွန့်စားကာ မိမိကိုယ်ကိုယ်၊ ခရီးသည်များနှင့် အခြားလမ်းအသုံးပြုသူများအတွက်ပါ ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်နိုင်သောအခြေအနေအထိ ကောင်းမွန်ပြည့်ဝသော အနားယူမှုမရှိပဲ အချိန်ပိုများစွာမောင်းနှင်သည်ဟု တွေ့ရှိရပါက ရှေ့လျောက် ခရီးစဉ်ချထားပေးမှုများ လျော့ကျသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်ကိုယ်တိုင်နှင့် သင့်ခရီးသည်များ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံစေရေးအတွက် သင့်ရဲ့ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လာမှုဖြစ်ပေါ်လာတော့မည့် ရှေ့ပြေးလက္ခဏာများကို အလုပ်ချိန်တနေ့လုံးသတိထားစောင့်ကြည့်ပေးရန်နှင့် နောက်မကျသွားခင်မှာ အလုပ်မှအနားယူချိန် ယူပေးစေလိုပါတယ်။ ပင်ပန်းနေတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်မချပါနှင့်။ သတိပေးစာမှ အကြံပေးချက်ကို မလိုအပ်ပါက ဘယ်လိုအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာလဲ ?
ယခုလတ်တလောတွင် အချိန်များစွာကျော်လွန်မောင်းခြင်းအားသိရှိရပါက ရရှိမည့်အသိပေးချက်များမှာ သတိပေးရုံမ ျှသာလုပ်ဆောင်နိုင်သေးပါတယ်။ သို့သော်လည်းပဲ ရှေ့လျောက်တွင် မိမိ၏ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေမှုကြောင့် ယာဉ်မောင်းများမိမိကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ ခရီးသည်များ နှင့်အခြား လမ်းအသုံးပြုသူများကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်အထိ စွန့်စားလုပ်ကိုင်ခြင်းများလုပ်ဆောင်ပါက ခရီးစဉ်များလျော့နည်းရရှိခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းအား ရှောင်ကျဉ်နိုင်စေရန် ဘေးကင်းစေမည့်အချက်များ
အကယ်၍သင်အိပ်ငိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် အန္တရာယ်ဖြစ်ခြင်းအတွက် အချိန်လွန်နောင်တရမည့်အစား လန်းဆန်းနိုးကြားနေစေမဲ့ နည်းလမ်းများကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ် !
ယာဉ်မောင်းနှင်ခြင်းမစတင်ခင်မှာ လုံလောက်တဲ့အနားယူမှု သေချာစွာရယူထားပါ
ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံမှာ အချိန်ကြာမြင့်စွာထိုင်ရခြင်းဟာ သွေးလေလည်ပါတ်မှုကို နှေးကွေးစေပါတယ်။ ထို့ကြောင့် တနေကုန် နိုးနိုးကြားကြားရှိနေစေရန် ကိုယ်လက် အညောင်းဆန့်ခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းများ ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးဖို့သတိရစေလိုပါတယ်
အတတ်နိုင်ဆုံး ကျန်းမာစွာစားသောက်ပါ။ လေ့လာချက်များအရ အမြန်သုံးဆောင်နိုင်သော အစားအစာများနှင့် အဆီ၊ အငံနှင့် အချိုများသော အစားအစာများဟာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်း တွေ့ရှိထားပါတယ်။
ရေဓါတ်မခမ်းခြောက်ပါစေနှင့် ! ရေသောက်ပေးခြင်းဟာ ရေဓါတ်ရရှိနေဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါပဲ။ ထိုသို့သောက်ပေးခြင်းဟာ သင်ယာဉ်မောင်းနေစဉ်မှာလဲ ပင်ပန်းမှု အခြေနေကိုကူညီထိန်းညှိပေးထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကဖင်းဓာတ်အများအပြားစားသုံးခြင်း (ဥပမာ-ကော်ဖီများများသောက်ခြင်း) ဟာ အချိန်ကြာကြာ အထောက်အကူမဖြစ်သည့်အပြင် အလွန်အကျွံ စားသုံးမိပါက ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်ခြင်းကိုဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် ထိန်းသိမ်းကာစားသုံးစေလိုပါတယ်။
ယာဉ်မောင်းများရဲ့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုဟာ လမ်းပေါ်တွင် မတော်တဆဖြစ်ခြင်းနှင့် သေဆုံးပျက်စီးခြင်းများရဲ့ အဓိကအကြောင်းအရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အန္တရာယ်ရှိလာနိုင်မည့် အခြေအနေများအတွက် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု၏ ရှေ့ပြေးလက္ခဏာများ ဖြစ်သည့်အောက်ပါအချက်များကို သိရှိထားခြင်းဖြင့်ရှောင်ကျဉ်နိုင်ပါတယ်:
ပင်ပန်းနေတဲ့ သင့်ကိုယ်သင် စိတ်မချပါနှင့် - ယာဉ်မောင်းနေစဉ် အိပ်ငိုက်နေမိပါက အရမ်းနောက်ကျသွားနိုင်ပါတယ်။